पहिलो त्रैमासमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २५ प्रतिशतले बढाए नाफा| Corporate Nepal
पहिलो त्रैमासमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २५ प्रतिशतले बढाए नाफा
मंसिर ८, २०७७ सोमबार ०८:४०
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत १८ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजानिक गरेका छन् ।
उक्त वित्तीय विवरण अनुसार १८ ओटा कम्पनीको कुल नाफा गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा २५ दशमलव ६२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुल रू. ९६ करोड २१ लाख ३ हजार नाफा कमाएको हुन् ।
गत आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीहरुले रू. ७६ करोड ५८ लाख ७६ हजार नाफा कमाएका थिए । वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका १८ ओटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले कमाएको छ । कम्पनीले चालू आवको पहिलो त्रैमासमा रू. १२ करोड ४४ लाखभन्दा बढी नाफा कमाएको हो ।
गत आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले रू। ७ करोड ५३ लाख नाफा कमाएको थियो । गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवमा कम्पनीको नाफा ६५ दशमलव २१ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । त्यसैगरी, दोस्रोमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले रू. १२ करोड २३ लाख नाफा कमाएको छ ।
कोरोना बीमाको दाबी करिव आधा मात्रै भुक्तानी
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको चाबहिल र सूर्यविनायकमा नयाँ शाखा
पुनर्बीमा कम्पनीको संभाव्यता अध्ययन गर्न बनाइएको समिति सुरुमै विवादमा
शिखर इन्स्योरेन्सको साधारणसभा चैत ५ मा , लाभांशसँगै हकप्रदको प्रस्ताव पारित गरिने